Ankehitriny, izao tontolo izao dia nametraka ny lokon'ny marsala tamin'ny dingana voalohany amin'ny "rambon-trano" - aloky ny ravin-tsoavaly manerantany, manintona sy manintona miaraka amin'ny marika mena. Ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaran-tarehy dia mampiseho ny akanjo sy ny fitaovana an'io loko tena mahavariana io, izay nankasitraka ireo vehivavy lamaody eran-tany, izay nanandrana nandravaka ny akanjon'izy ireo tamin'ny aloky ny alokaloka tsara tarehy.
Mianara kely momba ny lokon'ny Marsala
Marsala dia antsoina hoe loko ny vanim-potoana, izay notononina voalohany taorian'ny fampisehoana lamaody tamin'ny fanangonana lohataona tamin'ity taona ity. Ireo mpandahateny tarihin-dry zareo dia nampiseho ny lalao tena virtuosic tao anatin'ireo fanangonam-bokony ireo tamin'ity feo ity. Tsy vitan'ny hoe miara-mikambana amin'ny palette maromaro amin'ny alokaloka hafa izy, saingy toa manintona ny fanatrehany tsy miankina amin'ny endrik'ilay vehivavy marina. Raha miresaka momba ny tsikombakomba sy ny loko izay mifampiankina ny loko marala, dia tokony heverina ho tsara indrindra ny firaiketan'io alokaloka io miaraka amin'ny tonon- tsiran-tena sy pastel rehetra , toy ny volomparasy, volamena, tiroza, maitso ary manga.
Ny lokon'ny marsala amin'ny akanjo, araka ny manam-pahaizana momba ny lamaody, dia tokony ho lazaina amin'ny rehetra. Ny zava-misy dia ny loko isan-karazany dia mirakotra loko maro be: avy amin'ny mena-volomparasy ho burgundy ary na dia ruby ​​aza. Amin'ny fararano, ny akanjo an'io alokaloka io dia nofinidin'ny ankizivavy avy amin'ny vahoaka, amin'ny ririnina, ny valala sy ny kapa amin'ny tonon'ny mpanankarena manan-karena amin'ny divay dia mety tsara amin'ny endriny amin'ny endriny hafa amin'ny akanjo ivelany , ary amin'ny lohataona mafana sy ny lohataona mafana, ny tovovavy ao anatin'ny akanjo lava lava sady mendrika dia hijery tsara toy ny tena divy Hollywood.
Combina amin'ny akanjo amin'ny loko marala
Raha nametraka tanjona iray hividianana aloka vaovao izay nanjary nahavoa tamin'ity taona ity, ny fashionista rehetra dia afaka manontany tena ny fanontaniana iray voajanahary: inona no mampifangaro ny lokon'ny marsala. Soa ihany, ny olana amin'ny famoronana sary iray mahafeno ny fepetra rehetra, na dia ireo fepetra takiana indrindra amin'ny fomba sy ny firindrana aza, dia tsy hitsangana ho an'ny fanao amam-bika. Raha ny marina, ny zavatra tena manan-danja amin'ny marçala dia ny universalité.
Diniho àry ny firafitry ny lokon'ny Marsala, mifototra amin'ny toerana misy azy:
Ny akanjo sy ny pataloha dia hifanaraka tsara amin'ny tony, fotsy, beige, manga, manga na tortelana manga.
Ny akanjo ny alokaloky ny Marsala dia tsy mila fanampiana, afa-tsy amin'ny accessories maloto sy kitapo kely mendrika.
Ny loko volom-bolo amin'ny marala dia ho tian'ny olona, ​​angamba, amin'ny ankizivavy mampihetsi-po fotsiny, mora mandeha any amin'ny fanandramana tsy misy fandeferana sy sary manjavozavo. Mifanaraka amin'ny sary mamirapiratra an'ity tovovavy ity dia tena hahatalanjona.
Ny loko manicure ny marsala miaraka amin'ny "fandraisana anjara" amin'ny loko maitso na glossy dia hahita tsara ny fantsika amin'ny halavany sy ny endriny.
Ny kitapo Marsala amin'ny endrika isan-karazany, ny endrika sy ny habe dia hahatonga ny sary feno sy feno. Ny tsipika mahitsin-kofehy mahazatra dia tena tsara ho an'ny vehivavy iray miasa ao anaty akanjo mafy, ary ny kitapo telo dimampolo dia ho fanampim-pahaizana manokana amin'ny fararano, izay misy jeans miavonavona, satroka be dia be sy pataloha hoditra.
Ny Accessories amin'ny loko marala dia hamela ilay zazavavy haneho ny toetra maha-izy azy. Ny satroboninahitra, ny kofehy, ny kavina, ny kavina sy ny brazin'io alokaloka io dia ho lasa ravin-tsarimihetsika mahavariana sy sarobidy vehivavy marina, izay tsy misy lamaody amin'ny lamaody.
Rustic style amin'ny akanjo
Ahoana no hanavahana ny fiovan'ny toetrandro?
Sandwich miaraka amin'ny voatabia
Ny zanakavavin'i Victoria sy i David Beckham no lasa zaza manan-danja indrindra tao Angletera
Packages ho an'ny fanamainana ao amin'ny oven mikrofo
Sakafo ho an'ny sakafo mahasalama
Ny faritra havia dia maratra eo ambanin'ny taolam-paty taorian'ny sakafo
Mialà eo amin'ny Ranomasina Mena
Fanadihadiana Dream - ny firaisana ara-nofo sy ny fandikana ny nofinofy momba ny firaisana
Ny endrika akanjo, manova mandrakizay ny lamaody
Chanterelles ao anaty saosy mamy
Nilaza ilay mpitsoka-panoherana fa miafina ao ambadiky ny fihetseham-po tsara i Heidi Klum: "Tena fitiavana izy!"
Pentalgin - fananganana
Ambony ambony vita amin'ny vato kanto amin'ny tanana manokana
Euphyllinum amin'ny ankizy